Barakat Simoon: ''Inni eenyu akka ta'eefi argeenis hinbeeku, ani garuu Barakat Simooniin jedhama'' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Bereket Simon
Obbo Barakat Simoon
Lammii Eertiraa kan ta'an Obbo Barakat Simoon, maqaan isaanii barreessitoota adda addaatiin akka balaalleefamaa ture kan hubatan baayyee turaniiti. Fakkeenyaaf namoota ajjeessuun baqatanii bahuun biyya Farannsaayi akka jiraatan barreeffameera.
Obbo Barakat garuu kana hunda hojiikooti jedhanii hordofaa hin turre.
Barreeffamni booda keessa barraa'e garuu isa bira darbuuun obbooloottan isaa itti dabalaniiru. Yeroo kanattis namoonni baayyeen isa shakkuufi sodaachuu eegallaan ture, Obbo Barakat yaaddoo keessa galuu akka egalan BBC'tti himan.
Maatii isaanii lammii Eertiraa irraa Finfinnee naannoo Poppulaaree jedhamutti dhalachuun achumatti guddatan. Yeroo boqonnaa gannaa ammoo maatiisaanii waliin Eertiraatti dabarsu ture.
Barnoota isaaniis erga mana barnootaa Liisee Gabramaariyaamii xumuranii booda carraa barnootaa argachuun biyya Faransaayi deeman. Jidduun yeroo muraasaaf gara Itoophiyaatti deddeebii'an illeen jireenyasaanii erga Faransaayiitti taasifatanii waggoota 40 lakkaa'ameera. Haa ta'u malee sababii maqaa isaaniif rakkoolee hedduun mudachuu dubbatu.
Itoophiyaadhaa bahusaaniitiin dura wanti hedduun akka mudate ture kan himan Obbo Barakat, duula Gamtaa Guddinaaf (Idigat Bahibrat) tiif Wallagatti ergamee dhiisee gara Finfinneetti deebii'uun, magaalattii keessatti sochii Paartii Tokkummaa Ummata Itoophiyaa yeroo sanaatiif waraqaa raabsuun hojjataa akka turan ni yaadatu.
Akkasumas Obbo Barakat barreeffamoota paartichaa manaa manatti raabsaa turan. Ittaansees namoota maqaansaanii motummaa kaadaniiru jedhamuun tarreeffaman waajjiraaalee motummootaa keessaa hatuun balleessaa akka turanis ni dubbatu.
Yeroo tokko tokkoos hojii meeshaalee waraanaa dhoksuu ykn dadabrse warra barbaadameef kennuu raawwachaa akka turnis hindhoksine. Namoota isaan waliin turan keessaayis kan ajjeeffaman, kan badan akkasumas biyya gadhiisanii kan baqatan akka jiran ni yaadatu.
Obbo Barakat barnoota isaa sababii Duula Gamtaa Guddinaatiin adda kute ture itti fufuuf fedhii qaba ture. Yeroo sana ture maqaansaa tarree warra 'baqataniiru' jehaman keessa jiraachu kan hubate. Yeroo kanattis jedhu Obbo Barakat, ''Waraqaa hatuuf muxxannoo waanan qabuuf wajjira Araat kiilootti argamu dhaquun xalayaa maqaan kiyyaa keessa jiru fudhee kiisii kootti dhokfachuun bahe.''
Maqichi waan badeef yeroodhaaf gara Liiseetti deebii'uun barnoota isaa itti fufuun xumuru danda'e. Isaan boodas carraa barnootaa argateen gara Faransaayiitti imale. ''Waajiruman duraan dhaqee waraqata jalaa hate sanatu barnootaaf akkan biyyaa bahuuf akka naaf mallatteessanii dhaqee gaafadhe. Isaanis naa mallatteessuun biyyaa bahe.''
Barakat Simoon eenyuu?
Obbo Barakat Simoon isa moggoo isaanii Obbo Barakat Simoon Ministira Dhimmoota Komunikeshinii motummaa Itoophiyaa duraanii fi kan aammaan tana naannoo Amaaraatti mana sirreessaa keessatti argamaniin akka wal beekan gaaffannee, ''Eenyu akka ta'e hinbeeku, argeenis hinbeeku, ani garuu Barakat Simooniin jedhama,'' jechuun nuuf deebiisaniiru.
Waraqaa eenyummaa Obbo Barakat Simoon
Obbo Barakat Simoon kana dura ministira Komunikeshinii itoophiya tureefi maqaansaa dhugaa 'Mabraatu Gabrahiwot' maqaasaa kan warasee anarraa akka ta'e barreeffamni bahee akka ture dhagaheera kan jedhan obbo barakat,sababii kanaafuu namoonni isa waliin akka walfakkeessan dubbata.
''Jalqab omaa hindhageenye ture. Maqaan isaas kan dhugaa natti fakkaata ture. Jalqaba kanan dhagahe, obboolaan kiyyaa Asimaraa jiran akkan ani motummaa Itoophiyaa waliin hojjataa jiru itti himamnaan ture. Waan isaa adda baafachuuf gara Asmaraatti imalee yoo na argan nama biraa akka ta'e hubachuun callisan.''
Booda keessa garuu waa'ee isaa inatarneetiin waan baayyee dubbisuu akka eegale hima. Maqaadhaan walfakkaachuun alatti Obbo Barakat waliin walitti na fiduunsaanii bitaa natti galee itt galusaa kan dubbatu Obbo Barakat, Seenaansaa ana waliin kan walitti fiduu omaa hinqabu,'' jedha. Barreessichi sababii maaliif akka narratti xiiyyeeffate hinbarre kan jedhu obbo barakat, ''keessattu wayita obbolaa kiyya lamaan abbaa waliin caqasuun barreesseetti kallattiin dhimmicha ana walin walitti hidhan. Ani garuu ministira Kominikeshiin hinturre.''
''Jalqab waan qoosaa jiran natti fakkaate ture,'' kan jedhu Barakat, booda keessa yoo irra dedeebii'amu na cinqaa dhufeera jedheera. ''Hiriyoonni waliin bardhee hundinu wayita bilbilaan wal agaruutti wanni inatarneetiin gadhiifamee ture ana akka ta'eetti amanu turan,'' jechun hima.
Waraqaa ragaa dhalootaa Barakat Simoon
Barakat lammii Eertiraa fi eenyummaa waldhahe
Obbo Barakat haadha warraa isaanii waliin gara Itoophiyaa dhufanii Hoteela Laaliibalaa jedhamutti buluuf maqaasaanii yoo galmeessan, keessummeessaan naasuun itti dhagamu fuulasaa irraa akka hubatan ni yaadatu.
Barreeffamni waa'e isaa irratti gadhiifamees akka namoota soodaataniif shakkan akka taasisee hindhoksine.
Barreffamichis namoota ajjeesseera; baqatee bahuun Paariis jiraataa kan jedhuufaa kan qabate ture. ''Barreessan kunis kana eessaa fidee akka barreesse naaf hingalle. Kanan bahees karaa seeraatiin yoo ta'u, gonkumaa Paariis jiradhees hinbeeku. Maatii keenya keessatti nuti 10. Garuu maaf obbooleyyan kiyya 2 qofa filate aka dhiyeesse naaf hingalle,'' jedheera.
''Sababni ittifamneef bu'uura hin qabu''
''Booda keessa yoo yaadu obboolaan kiyya eeraman kunnee qabsaa'oota turan. Akka obboleessa Barakat jedhamuufi kan Faransaayi jiraatu akka qaban hubateen booda walitti fiduun seenaa mataasaa kan barreesse natti fakkaata.''
Sababii kanaanis obbolaansaa Asimaraa jiraatan, ''obbolleessi keessan motummaa Itoophiyaa waliin hojjata, inni ganaadhaa fi komiiwwan biraa irra gahaa akka ture dubbatu.
Barakat maal hojjataa?
"Tarii Barakat Simoon kan biraas jiraachu malaa laata? Ani garuu Barakat Iyaasu malee Barakat Simoon kan biraa na mudate hinbeeku,'' kan jedhu obbo Barakat, sababii kanaan kan ka'ees walitti dhufeenyi namoota waliin qaban jalaa baduu hima.
Kanas yoo hubachiisu, ''Hiriyaan kiyya tokko firri jalaa du'ee jajjabeessuuf bilbilaaniif gonkumaa akka na hinbeekne ta'e. Anas dubbiin bitaa natti gale. Boodas Barakat Simoon dhugaa itti fakkaate akka ture natti hime. Hiriyoota kiyyaa baayyeeniis adda citeera.''
Namoota ajjeesseera jedhamuu kanneen irraa baqatan yoo yaadatuus 'nama aarsa' jedheera. Dubbiin yoo cimees, himannaan narratti banamu danda'a jechuun akka yaadda'aa turanilleen ni himu.
Obbo Barakat wayita ammaa kanattis biyya Faransaay magaalaa Naanti jedhamu keessa jiraachaa kan jiranii fi abbaa ijoollee sadiiti. Gaheessi waggaa 60 kan ta'an Obbo Barakati, oggummaa hakimii wallaansa beeladaatiin kiliinika ofiisaanii saaqqachuun hojjataa jiru. Soorama bahuuf 'xiqqoodhumatu na hafe' kan jedhan obbo Barakati, ijoolleen isaanii yunivarsitii galusaanii BBC'tti himaniiru.
Neeyimaar rikardii galchii Peelee ni cabsaa?
Bataskaanni Ortodoksii Eritraa paatiriyaarkii haaraa muudde